H & X Electronic Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2010 izay mifototra amin'ny Dongguan Fenggang Hongxin Bag orinasa.
Ny orinasa efa naorina ho an'ny mihoatra ny 10 taona ny mafy orina zavatra samy hafa rehetra Consumer elektronika Accessories, indrindra fa tamin'ny isan-karazany ny tranga sy ny kitapo, toy ny EVA raharaha sy nylon raharaha, Neoprene raharaha, mangarahara PVC raharaha, Pu raharaha, hoditra raharaha sy ny etc.
Ao amin'ny H & X, isika mpanamboatra planina sy fomba amam-panao sy ny kitapo tranga izay miasa mba hiarovana sy fitaterana entana amin'ny fepetra manokana. Ny fanoloran-tena tsy voahozongozona mpanjifa afa-po amin'ny tsara indrindra sy efa nahazo laza antsika ho mpitarika orinasa. Raha ny marina, ny mpanjifa fanohanana ekipa natokana, no mamaly ny fanontaniana ao anatin'ny efatra amby roapolo ora. Izany no karazana fanompoana mpanjifa izay nahazo antsika avo ny tahan'ny fihazonana sy fifandraisana eo ho eo ny halavan'ny mpanjifa valo taona.
Fanjairana atrikasa, ho vita ny semi-tranga ho feno vokatra. Rehetra ny mpiasa no za-draharaha worke, 70% amin'izy ireo miasa eo amin'ny facotry mihoatra noho ny 7years.
Neating atrikasa: mpiasa mazoto nanapaka ny extral kofehy avy ny raharaha mba hahazoana antoka ny toe-javatra dia madio sy milamina rehefa misokatra izany ..
Ahoana ny fomba hifidianana mpanamboatra pl ...
Ahoana no ataon'ireo mpanamboatra harona plastika ...
© Copyright - 2010-2022 : Zo rehetra voatokana. H & X Electonic Co, Ltd Soso-kevitra - Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile
Eva Hard Shell Pencil Case For Kids 2 , Raharaham-pitenenana amin'ny endrika Football, Gym Armband Bag, kitapo ho an'ny ankizy , kojakoja elektronika ho an'ny mpanjifa , Eva Hard Case ,